Caalamka, 04 October 2018
Idaacadda Galabnimo - 1600
Khamiis 4 October 2018
Nin hubeysan oo isku dayey inuu galo guriga Gulen
Nin hubeysan ayaa la tuhunsan yahay inuu arbacadii isku dayey inuu galo dhisme ku yaalla gobolka Pennsylvania ee Mareykanka oo uu degan yahay wadaadka Turkish-ka ee Fethullah Gulen, hase yeeshee waxaa ceersaday ilaalada dhismaha.
Soomaalida Mareykanka Sharciga ka Weydey ee Kanada u Qaxdey
Wareysi: Siyaasadda Sweden oo cakiran
Xijaabka oo laga Mabnuucayo Gobolka Quebec, Kanada
Xisbiga loo soo gaabiyo CAQ, (Coalitio Averi Quebec) ayaa ku guuleystey gobolka Quebec, waxyaabaha uu ololaha doorashada ku galeyna waxa ka mid ahaa xagjirnimo ka dhan ah soogalootiga.
Dadaallada Dhaqdhaqaaqa MeToo
Hal sano ka dib markii uu soo baxay dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo MeToo, kaas oo wax badan ka beddelay Maraykanka, ayaa faraxumeynta dumarku ay wali sii tahay dhibaato caalami ah.
Meydka qof Soomaali ah oo laga helay Basel
Meydka qof Soomaali ah oo ay ka muuqdaan dhaawacyo, ayaa laga helay mael wabi ah oo ku taalla, magaalada Basel ee Waqooyiga Galbeed dalka Switzerland kuna dhow xadka dalkaasi uu la wadaago Faransiiska iyo Jarmalka.
Afghanistan: Qarax lala beegsaday olole doorasho
Qarax ismiidaamin ayaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dad ka qeyb galayey olole doorasho oo ka dhacayey bariga Afghanistan, halkaasi oo lagu dilay 14 qof, 30 kalena lagu dhaawacay.
Madaxweyne Erdogan oo Jarmalka ka Furay Masaajid Weyn
Madaxweynaha Turkiga Rayyip Erdogan ayaa maanta magaalada Cologne ee dalka Jarmalka ka furay mid ka mid ah masaajidada ugu weyn qaaradda yurub.
Indonesia: Boqolaal ku Dhintay Dhulgariir iyo Sunaami
Dalka Indonesia ku dhawaad 400 oo qof ayaa dihntay, in kabada 550 kalena way ku dhaawacmeen dhul-gariir xoogan iyo Tsunami ka dhalatay oo ku dhuftay bartamaha dalkaasi.
Netanyahu: Iran waxay qarineysaa hub nukliyeer
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa Iran ku eedeeyey inay haysato xarun hubka nukliyeerka lagu keediyo oo ku taalla magaalada Tehran.
Dalalka ku haray heshiiska Nukilyeerka Iran oo heshiis gaaray
Shanta dal ee ku haray heshiiska Nuclera-ka Iran ayaa isku raacay inay sameeyaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya inay sii wadaan ganacsiga ay la sameynayaan maamulka dalkaas, ayaga oo dhinac maraya cunaqabateynta Mareykanka uu saaray.
Soomaali Dhul ku Iibsatey $6,500,000
Qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Edmonton ee dalka Kanada ayaa ku guuleystey in ay iibsadaan dhul ay ku tilmaameen kii ugu weynaa ee ilaa iyo hada ay iibsadaan Soomaalida ku nool waqooyiga Mareykanka, Kanada iyo Mareykan.